Cingbawi's Blog - Zomi Community Network - Your Network
Cingbawi's Blog (8)
Added by Cingbawi on June 6, 2012 at 10:56am — No Comments
Added by Cingbawi on April 8, 2011 at 12:30am — 1 Comment
Kawlgam kiteelna Update
မွန်းတည့် ၁၂း၃၀ ယနေ့ မနက် ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် တံတားအောက်မှ ဘောကွင်းဖြစ်
မြ၀တီကို ကူးပြီး ၀င်ရောက်သတင်းရယူသူဂျပန်နိုင်ငံသား တိုနီမက်ဆာမိုတို အသက် ၄၉ နှစ်
ဘောပင်ဗွီဒီယိုကင်မ၇ာတချောင်း၊ မြန်မာဖုန်းတလုံး၊ ထိုင်းဖုန်းတလုံး ၊ နှင့် AFP သတင်းဌာန ကဒ်ပြား
နှင့် passportတို့ နှင့်အတူ ဖမ်းစီးခံရပြီး နောက် မြ၀တီ ရဲစခန်းမှ စစ်ဆေးမေးမြန်းရန်အတွက် ဖမ်းဆီးထား
နံနက် ၁၂း၂၄ ကြံ့ဖွံ့ က အချို့ နေရာများ တွင် မဲပေးရန်…
Added by Cingbawi on November 7, 2010 at 7:07am — 1 Comment
Tangvalte inalawmngaih Nungakte tung ah bawl ding thute
Pasal inalawmngaih numeite tung ah bawl ding thute
1. Na lawm ngaihnu i birthday gen vet lo ding, nang thei gige ding in, Surprise in birthday cake, celebration, letsong khat teitei piak sawm ding.
2. Na lawm ngaih nu mite' lak ah vangpia.
3. Na lawm ngaihnu mite' lak ah tai, ko, kam khawuh, aw khauh tawh hopih, dang ngei nkei in.
4. Na lawm ngaihnu shopping, market… Continue
Added by Cingbawi on October 23, 2010 at 7:08pm — 11 Comments
Her Beauty Is Eternal!…
Added by Cingbawi on October 14, 2010 at 8:46pm — No Comments